UGeorge RR Martin uthetha ngesiphelo sakhe kwiMidlalo yeTrone | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Ababhali, I fantasy, Iincwadi
Umdlalo wetrone idlule. Inguqulelo yayo kamabonwakude ubuncinci. 8 amaxesha igcwele yonke into, ilungile, imbi kwaye iqhelekile, kodwa isatsala izigidi zabalandeli kwihlabathi liphela. Kwaye i impikiswano nangokuphela kwesiphelo. Kodwa yakhe Inguqulelo yoncwadi kusafuneka ibhaliwe kunye nomdali wayo, George RR Martin, uthethile ngayo esithi izakuba njalo eyahlukileyo kwaye inde kakhulu.
1 Ukugqiba umdlalo weetrone
2 UGeorge RR Martin uthatha isitokhwe
4 Isiphelo kodwa sisiqalo
6 Kuza kuba njani oko
Ummangaliso Umdlalo wetrone
Uyenzile ngoMvulo odlulileyo emva kokugqiba a ixesha lesibhozo elingalinganiyo, ngokuka baninzi, okumnandi, ngokutsho kwabanye, kunye nesiphelo esinempikiswano, phantse wonke umntu. Ndiyavuma ukuba ndingomnye wale mizekelo imbalwa kwiplanethi eyabona kuphela ixesha lokuqala kwaye ingakwazanga ukoyisa ukunqunyulwa kukaNed Stark. Ke andilahli namhlanje ukuthanda okanye ukungaqiqi kwamawaka abalandeli balolu ngcelele. Ewe ngokunjalo, ndine ekubeni ndinenye uqhagamshelo olulungileyo noluthe ngqo kunye... UJon Snow, que Sele esixelele ukufundwa kwakhe ixesha elidlulileyo.
UGeorge RR Martin uthatha isitokhwe
Uyixela kwibhlog yakhe. Ixesha elidlulileyo ngokuncwina okoko waqalisa, ngaphezulu kweshumi leminyaka eyadlulayo, kwiprojekthi yomdlalo kamabonakude owawunokutshintsha ubomi bakhe. Wayesele ezenzile izinto kwiscreen esincinci. Kodwa kwakungekho ndlela yakwazi oko ukulungelelaniswa kwelo bali eliqale ngalo Ingoma yomkhenkce nomlilo Bendizakucinga ukuba ibiyintoni na: a kwihlabathi liphela kunye nempumelelo kunye nezigidi zabalandeli abanenzondelelo kunye nempumelelo enkulu kumabonwakude kwinethiwekhi HBO, esele ifumene udumo olukhulu kunye nobungangamsha eRoma.
UGeorge RR Martin ubalaselisa hayi kuphela ulwaneliseko okanye amabhaso angenakubalwa. Kwakhona inyani jika isamente elungileyo kodwa engaziwayo (ngaphandle kwa ngaphandle kwamagama amakhulu kwindawo yase-Bhritane) kwiinkwenkwezi zeplanethi. Nkqu umangalisiwe kukuba naye abe ngomnye wabo kwaye uyavuma ukuba akaqinisekanga ngokwenzekileyo okanye njani.
Ewe uGeorge RR Martin kufuneka abulele abantu abaninzi, kangangokuba umntu othile ushiyekile. Ukusuka kubavelisi, isamente, iqela okanye inethiwekhi. Kodwa yamkele loo nto kuninzi kakhulu esinokubulela ngako. Uya kukhetha ukukhumbula okanye ukubhala malunga namaxesha owathandayo ukusuka ekufotweni koluhlu xa uziva ungathandeki, kuba okwangoku baninzi kakhulu kwaye awunalo ixesha lokwenza ubulungisa obubafaneleyo.
Isiphelo kodwa sisiqalo
Yinto leyo Martin ufuna ukucinga. Ukuba wonke umntu kuthotho (abalawuli, abalingisi, abasebenzi ...) bazakusasazeka. Kuya kubakho iiprojekthi ezininzi kubo kwiindawo eziliwaka ezintsha kunye namabali. Ke yena, uya kuhlala ekhona kwaye uxakekile.
Kuba njengomvelisi unenye cinco icwangciselwe HBO, dos for Hulu kwaye enye ine Isiteshi seMbali. Ezinye zikhona ngokusekwe kumabali abo nakwiincwadi zabo kunye nabanye abavela kubenzi abahlukeneyo. Ewe kunjalo, uyabhala kuba ubusika bakhe abukapheli.
Kuza kuba njani oko
Yile nto bayibuza kuye iphindaphindwe. Kwaye ukuba iya kufana ne (inempikiswano) kolu ngcelele. Kodwa George RR Martin ukhetha ukudlala ukuphazamiseka ngo-ewe, hayi okanye mhlawumbi. Kwaye thelekisa umsebenzi we icandelo kuthotho, ebenalo iiyure ezintandathu Kwelo xesha lokugqibela. Kodwa ilindele ukugcwalisa amaphepha angama-3.000 kwiincwadi zakhe ezimbini ezizayo, kwaye siza kubona ukuba akazukuphinda ongeze (kunye nezinye izahluko kunye nemiboniso) ukuba uyayifuna.
Kwakhona mema abafundi ukuqhubeka nokuthelekisa ukuba, umzekelo, babenjalo Iinjongo ezahlukeneyo zabalinganiswa abathile ezincwadini nakuthotho. Ke yonke into isemoyeni kwaye yazibophelela kuqikelelo nakwimpikiswano.
Ekugqibeleni phosa umbuzo ukomeleza i-enigma kunye nokuqhubeka nokuqhubela phambili ingxoxo phakathi kwabafundi bakho kunye nababukeli. Siza kuba yintoni isiphelo "sokwenene"? Ngaba enye yeencwadi okanye enye evela kuthotho? Ewe, kuya kufuneka sihlale silindile, kubonakala ngathi busika bunye kunenye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » iintlobo » I fantasy » UGeorge RR Martin uthetha ngesiphelo sakhe kwiMidlalo yeTrone
UEduard Punset uyafa. Iincwadi ezi-6 ezivela kwezona zilandelwe kakhulu kwezenzululwazi